Tononkalo nataon'i Ithaca nataon'i Cavafis tamin'ny fanontana ny Nordic Books - Ikkaro
firosoana >> boky >> Ithaca an'ny Cavafis
Ny Magy Telo dia nitondra ahy ny fanontana boky izay tena tadiaviko. Ithaca an'ny Cavafis, fanontana ny Boky Nordicamin'ny dikantenin'i Vicente Fernández González ary sary nalain'i Federico Delicado.
Io no famakiako voalohany tamin'ny taona. Fanontana hanana vatosoa kely ary afaka mamaky sy mamaky azy io indray rehefa mankafy ny sary.
Topazo maso ny booktrailer mba hitia
Heveriko fa ho fantatry ny rehetra Constantino Cavafis, poeta grika tamin'ny taonjato faha-XNUMX, teraka tany Alexandria (Egypt). Heverina ho poeta grika manan-danja indrindra tato ho ato. Ho an'ny tononkalony fanta-daza Ithaca, asiana asa hafa toy ny Miandry ireo barbariana o Andriamanitra mandao an'i Antonio.
Hitanao hatraiza hatraiza ilay tononkalo. Raha liana amin'ny famakiana azy ianao dia avelako ho anao amin'ny farany. Fa ny tena ankafizina amin'ity tranga ity dia ny fanovana. Boky iray manontolo natokana ho an'ireo andininy 36 amin'ny tononkalo iray izy io.
Fahagagana iray ao anatin'ny andro vitsy ananako azy io, esoriko isan'andro saika hankafizako sy hamerenako azy ity. Ary izany fahatsapana izany, izany fahafinaretana izany dia tsy tratra amin'ny nomerika. Raha tianao dia azonao atao vidio eto
Ity tononkalo ity dia efa nodinihina tsara ary nodinihina tsara, azonao atao ny mitady ny tena fandalinana raha io no andrasanao. Ny ilaozako eto dia ny fiheverako fa novaiko ho ilay tononkalo, miorina amin'ny famakiana indray sy ny zavatra niainako teo amin'ny fiainana, dia manome heviny vaovao amiko.
Ny omeny ahy dia torohevitra. Araraoty ny fiainana, araraoty ny làlana amin'ny zavatra rehetra ataonao, amin'ny tanjonao, satria ny tena zava-dehibe ary izay hampanan-karena anao dia ireo traikefa, ireo olana sedrainao mandritra ny dia na amin'ny làlana mankany amin'ny tanjonao fa tsy ny tanjona. . amin'ny tenany.
Izany no antony amporisihany antsika tsy ho maika handeha amin'ny toerana alehantsika, amin'ny tanjontsika, any amin'ireo Ithacas antsika ary hikaroka, hankafy, hiainana ary hianatra izay rehetra azontsika atao. Hanitatra ny dia sy hampitomboana ireo traikefa niainana.
Tena mahafaly ny mamaky sy mamaky ity tononkalo ity.
Raha niditra ianao mitady ny tononkalo eto anananao.Poem Ithaca nataon'i CP Cavafis (Dikantenin'i Vicente Fernández González)
Rehefa miainga amin'ny dianao mankany Ithaca,
mangataha mba ho lava ny lalanao,
feno traikefa nahafinaritra, feno fahalalana.
Ho an'ny Laystrygians sy Cyclops.
Aza matahotra an'i Poseidon tezitra,
tsy hiampita ny lalanao mihitsy izy ireo,
raha avo ny fisainanao, raha fihetsem-po
marefo amin'ny akanin'ny fanahinao sy ny vatanao.
Na ny Laystrygians na ny Cyclops
na Poseidon masiaka ho hitanao,
raha tsy entinao ao anatin'ny fanahinao izany,
raha tsy manandratra azy ireo amin'ny lalanao ny fanahinao.
ary maraina fahavaratra marobe
ao anatin'izany-amin'ny fahafinaretana inona, amin'ny fahasambarana inona-
miditra seranana tsy mbola fahita ianao;
mijanona ao amin'ny efitrano fenisianina fenisianina,
ary tazomy ny varotra malalany,
perla sy haran-dranomasina, amber sy ebony,
sy ny fofona manitra amin'ny karazany rehetra,
ny arom-pofona mahavelom-bolo kokoa azonao atao;
amin'ireo tanàna ejipsianina maro hitany,
hianatra sy hianatra amin'ireo izay mahalala.
Ataovy ao an-tsaina foana i Ithaca.
Tonga any no alehanao.
fa tsy misy maimaika amin'ny dia.
Aleo maharitra mandritra ny taona maro;
ary rehefa antitra ianao dia miantsona amin'ilay nosy,
miaraka amin'ny harena rehetra azo teny an-dàlana,
tsy miandry an'i Ithaca hampanan-karena anao.
Ithaca dia nanome anao ny dia mahafinaritra.
Raha tsy nisy izany dia tsy ho niainga ianao.
Tsy afaka manolotra zavatra hafa anao intsony izy.
Ary raha mahita azy mahantra ianao dia tsy namitaka anao Ithaca.
Amin'ny fahendrena azonao, amin'ny zavatra niainanao,
efa azonao ny dikan'ny Ithacas.
Vaovao, fitaovana ary loharanom-pahalalana mahaliana mba hampitombo ny fahalalan'ny mpanoratra sy ny sanganasany
Cavafis Archive ofisialy (amin'ny teny anglisy)
1 Dikan'ny Ithaca
2 Ilay tononkalo